Kooxda Al-Nusra Front oo xiriirka u jartay ururka al Qaacida – The Voice of Northeastern Kenya
Kooxda Al-Nusra Front oo xiriirka u jartay ururka al Qaacida
Star FM July 29, 2016
Masuuliyiinta sar sare ee kooxda Al Nusra Front ee ka dagaalanta waddanka Syria ayaa ku dhawaaqay in ay badaleen magicii kooxdooda isla markaana ay xiriirka u jareen shabakadda al Qaacida oo ay markii hore xubin muhiim ah ka ahaayeen.
Hogaamiyihii hore ee kooxda Al Nusra Front Abu Mohammed al-Jolani oo in muddo ah kadib markii ugu horeysay kasoo muuqday cajalad muuqaal ah ayaa shaaciyay in magicii kooxdaasi hadda laga dhigay “Jabhat Fath al Sham” ama (jabhadda xoreynta dhulka Shaam).
Sarkaalkan ayaa sheegay in ay kooxdiisa gabi ahaanba so oaf jartay howlgalladii ay ku fulineysay magaca jabhadda Nusra xiligaan wixii ka dambeeyana ay magacooda cusub isticmaali doonaan.
Cajaladda uu kasoo muuqday Mr Jolani oo la shaacay galinkii dambe ee shalay oo khamiis ahayd ayaa waxa ay kusoo aaday xili dhawaan ay soo baxeen warar sheegaya in hogaamiyaha sare ee shabakadda Al Qaacida uu ansixiyay tallaabada ay kopoxda al Nusra Front uga go’day Al Qaacida.
Kooxdaan oo si aad ah u hubeysan ayaa markii ugu horeysay magaceeda soo shaac bixisay horaantii sanadkii 2012-ki, kadib markii ay sheegatay masuuliyadda qaraxyo bambaanooyin ah oo ka dhacay qeybo ka mid ah magaalada Aleppo.
Dowladaha Mareykanka, Ruushka iyo golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa horay kooxda Al Nusra Front ugu aqoonsaday koox argagixiso ah, iyagoo kusoo rogay cunaqabateyno kala duwan.
Waxa ay sidoo kale kooxdaan iyo kooxda kale ee la magac baxday dowladda Islaamka ee ISIL ka reebeen garabyada mucaaradka dalka Syria ee ka qeyb galaya wada xaajoodyada nabadeed ee lagu dhex dhexaadinayo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Syria.
← Hillary Clinton oo si rasmi ah u aqbashay musharaxnimada xilka madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga Dimuqraadiga
Askari ka tirsan booliska oo toogasho isku dilay →
1 thought on “Kooxda Al-Nusra Front oo xiriirka u jartay ururka al Qaacida”
Ra’isulwasaare ku xigeenka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay ka hortago xagjirnimada. March 22, 2019
Baaq Loo Diray Xildhibanada Golaha Shacabka Ee Ku Maqan Safarada Dibadda March 22, 2019
Siyaasiyiinta xisbiga ODM oo ku xigeenka madaxweynaha dalka dhaliil u jeediyay March 22, 2019
Guddiga EACC oo soo jeediyay in xabsi daa’in lagu xukumo dadka ku kaco musuqmaasuqa March 22, 2019
DHAGEYSO WARKA FIIDNIMO EE IDAACADDA STAR FM 20:30 PM 21-3-2019 March 21, 2019
Waaxda cadaaladda ee Maraykanka oo u yeertay madaxda shirkadda diyaaradaha ee Boeing March 21, 2019
Hay’adda laanqayrta cas Kenya oo codsatay 8 milyan oo lagu caawinayo shacabka 17 ismaamul March 21, 2019
madaxweyne kuxigeenka dalka wiliam ruto oo booqanaya ismaamulka mandera. March 21, 2019
Xiddiga kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho oo hal sabab darteed aan u doonayn inuu ku biiro Manchester United March 21, 2019
Kulanka Guddiga joogtada oo furmay iyo qodobo laga soo saarayo March 21, 2019
Ra’isulwasaare ku xigeenka Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay ka hortago xagjirnimada.
Baaq Loo Diray Xildhibanada Golaha Shacabka Ee Ku Maqan Safarada Dibadda
Siyaasiyiinta xisbiga ODM oo ku xigeenka madaxweynaha dalka dhaliil u jeediyay
Guddiga EACC oo soo jeediyay in xabsi daa’in lagu xukumo dadka ku kaco musuqmaasuqa
DHAGEYSO WARKA FIIDNIMO EE IDAACADDA STAR FM 20:30 PM 21-3-2019
Waaxda cadaaladda ee Maraykanka oo u yeertay madaxda shirkadda diyaaradaha ee Boeing
Hay’adda laanqayrta cas Kenya oo codsatay 8 milyan oo lagu caawinayo shacabka 17 ismaamul
madaxweyne kuxigeenka dalka wiliam ruto oo booqanaya ismaamulka mandera.
Xiddiga kooxda Barcelona ee Philippe Coutinho oo hal sabab darteed aan u doonayn inuu ku biiro Manchester United
Kulanka Guddiga joogtada oo furmay iyo qodobo laga soo saarayo